> Resource > Mac > Macbook Air Photo Recovery Guide
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photo ka Macbook Air?
Waxaan si qalad ah la tirtiro dhowr sawiro ka qor Macbook Air, ka dibna waxaan ka shubeen aan qashinka. Hadda si hammuun aan u baahan xal dib si aad u hesho photos aan, ma jirtaa cid ku soo jeedin wanaagsan? Mahad badan.
Xalka ugu wanaagsan waa in ay iyaga soo ceshano ka gurmad ah haddii aad leedahay. Haddii kale, waxaad weli heli kartaa Macbook Air software kabashada sawir kaa caawinaya in aad Wondershare Data Recovery for Mac waa barnaamij si fiican -designed in uu buuxiyay shuruudaha oo dhan. Wax kasta oo sababaha keeni sawiro laga badiyay ka Macbook Air ama ka qalab aad kaydinta, Wondershare Data Recovery for Mac kaa caawin doona inaad si aad u hesho dib u fudayd.
Download version maxkamadda ka hoos ku qoran oo ku xidh aad Macbook Air hadda! Fadlan ha soo dajiyo barnaamij ku saabsan xijaab ama mugga in sawiro aad ayaa laga badiyay ka.
3 Talaabada inay Qabtaan Macbook Air Photo Recovery
Tallaabada 1 kabsado tirtiray images on Macbook Air leh "lumay Recovery File" mode
Daahfurka Wondershare Data Recovery for Mac oo aad arki doonaa interface la socda fursadaha soo kabashada: Recovery File Lost, Recovery Barzakh, ceeriin Recovery, iPhone Data Recovery ka Lugood iyo furmaya Recovery.
Haddii aad sawiro ayaa laga badiyay sababta oo ah tirtirka, formatting ama qalad nidaamka, waxaad qaadan kartaa "lumay Recovery File" sida isku day ah.
Tallaabada 2 Scan Barzakh gaar ah u Khasaaray Photos
Halkan waxa aad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan Risaalo in sawiro aad ayaa laga badiyay ka oo guji "Scan" si ay u eegaan sawirada lumay.
Haddii aad ku socoto inuu ka soo kabsado photos lumay ka aalad lagu kaydiyo dibadda, waxaad u baahan tahay in ay ku xirmaan aad Macbook Air iyo hubiyo in lagu aqoonsan karo sida drive adag.
Si aad u soo kabsado sawiro oo kaliya, fadlan dooro "Image" in "nooca file Dooro" doorasho.
Fiiro gaar ah: Haddii ay ahayd formatting xijaab keena idinkoo khasaaray sawir, fadlan dooro "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 kabsado masaxay Photo ka Macbook Air
Ayaa laga helay photos oo dhan lagu soo bandhigi doonaa fayl ka dib markii raajo-ka. Waxaad ku eegaan karo oo dhan oo iyaga ka mid in lagu hubiyo sida badan lumay sawiro la soo kabsaday karo.
Dooranaysaa sawiro aad u baahan tahay oo ka dhacay on "Ladnaansho" badhanka si ay u sii on your Macbook Air.
Fiiro gaar ah: Sawirrada soo kabsaday noqon kartaa si fudud overwritten haddii aad iyaga ku badbaadin meesha uu asal ah, sidaas darteed fadlan dooro xijaab cusub si ay u sii.
1 Marka laga reebo ka soo kabashada sawir tirtiray on Macbook Air, Wondershare Data Recovery for Mac waxtar inuu ka soo kabsado noocyo kala duwan oo nooc file ka Macbook Air, oo ay ku jiraan videos, files audio, emails, document files, iwm
Wondershare Data Recovery Waa labada la jaan qaada Mac iyo Windows computer. Haddii aad rabto in aad soo kabsado xogta ka computer Windows ah, waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa version Windows ee Wondershare Data Recovery .
iPhoto Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Photos tirtiray ka iPhoto Library
Sidee si ay u gudbiyaan Videos ka iPod si Mac